चुनावका लागि स्रोत जुटाउन सक्ने तर कोरोना भ्याक्सिन किन्ने पैसा नहुने ? किन माग्यो कोरोना भ्याक्सिन किन्न ‘च’न्दा’ ? «
चुनावका लागि स्रोत जुटाउन सक्ने तर कोरोना भ्याक्सिन किन्ने पैसा नहुने ? किन माग्यो कोरोना भ्याक्सिन किन्न ‘च’न्दा’ ?
प्रकाशित मिति : 14 January, 2021 3:05 pm
बुधबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सूचना छाप्यो। उक्त सूचनामा कोरोनाभाइरस विरूद्धको खोप किन्न एनजिओ, आइएनजिओ, व्यावसायिक, सामाजिक र परोपकारी निकायसँग पैसा मागिएको थियो। मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको खातामा पैसा जम्मा गर्न भनेको छ।
गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयको हवाला दिँदै स्वास्थ्यले खाता नम्बरै दिएर कोषमा रकम जम्मा गर्न भनेपछि अहिले सार्जवनिक वृत्तमा यसबारे चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ। आम प्रश्न छ- हाम्रो सरकारसँग कोरोनाको खोप किन्ने पैसा छैन?
कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएको एक वर्ष भइसक्यो। अमेरिका, बेलायतजस्ता धनी देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन थालिसके। हाम्रै छिमेकी भारतमा शनिबारदेखि खोप लगाउन सुरू हुँदैछ।
यस्तो बेलामा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय भने खोपका लागि ‘चन्दा’ उठाउन सुरू गर्दैछ। किन त ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार कोभिड भ्याक्सिनका लागि ५० अर्ब चाहिन्छ। सो रकममध्येबाट सुरूमा २० प्रतिशत जनसंख्याका लागि भ्याक्सिन खरिद गर्ने योजना छ।
तीन प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलगायत फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने जनशक्ति र १७ प्रतिशत अन्य जोखिमयुक्त जनसंख्यालाई लक्षित गरी भ्याक्सिन किन्न लागिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत संस्थाहरूले संसारका गरिब मुलुकहरूलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न ‘कोभ्याक्स’ अभियान सुरू गरेका छन्।
कोभिडको भ्याक्सिन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पर्याप्त स्रोत जुटिसकेको सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए। ‘बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट कोभिडको व्यवस्थापनमा हुने खर्च जुटिसकेको छ, नेपाल सरकारसँग पनि आन्तरिक स्रोत छँदैछ,’ ढुंगानाले भने।
स्रोत हुँदाहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन ‘चन्दा’ आह्वान गर्‍यो? हामीले यो प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई सोध्यौं। त्रिपाठीले एनजिओ, आइएनजिओले इच्छा हुँदाहुँदै पनि दिन नपाएपछि कोष खडा गरिएको तर्क गरे। ‘हामीसँग रकमको सुनिश्चितता छ, तैपनि एनजिओ, आइएनजिओहरूले लगानीको इच्छा हुँदाहुँदै नपाएको गुनासो गरेपछि कोष खडा गरिएको हो,’ उनले भने।
विदेशी दातृ निकायहरूले गर्ने सहयोगको पारदर्शीता हुन्छ। उनीहरूले आवश्यक ठाउँमा मात्र लगानी गर्छन्। तर, यसरी खडा गरिने कोषको रकम भने जथाभावी खर्च हुने गरेको छ। मन्त्री त्रिपाठीले भने यसमा अन्यथा सोच्न जरूरी नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोत नभएर कोष खडा गरिएको पनि हैन।’
चुनावका लागि स्रोत जुटाउन सक्ने तर कोरोना भ्याक्सिन किन्ने पैसा नहुने ? किन माग्यो कोरोना भ्याक्सिन किन्न ‘च’न्दा’?